ODUU : Haalli Obbo Daawid Ibsaa keessa jiran beekamaa miti jedhame | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ June 11, 2021 June 16, 2021
Haalli Obbo Daawid Ibsaa keessa jiran beekamaa miti jedhame.
Hayyu duree adda Biliisummaa Oromoo Obbo Daawid Ibsaa erga qaamolee mootummaatiin ugguramanii as jiraachuufi dhibuu isaaniiyyuu quba hin qabnu jechuun Gaafatamaan hariiroo Hawaasummaa ABO yeroo OMN-tti hime.
Obbo Daawid Ibsaa Adoolessa 17,2020 irraa eegalee mirga biliisaan socho’uu dhorkamuu isaanii kan yaadachiisu gaafatamaan Hariiroo Hawaasummaa yeroo ABO obbo Lammii Gammachuu, Eebila 1,2021 irraa eegalee ammoo Obbo Daawid Ibsaa namoota kam waliinuu wal quunnamuu akka hin dandeenye taasifaman jedha.
Ergasii as Eebila 3,2021 waraanni mootummaa qondaalotaafi miseensa dhaabichaa mana jireenyaa Obbo Daawid Ibsaa keessa jiraatan hunda hidhuun, Hayyu duree ABO Obbo Daawid qofa mana keessatti ugguranii akka turan OMN faana dha’uun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Guyyaa gaafa sanaarraa eegaluun, maatiin Obbo Daawidis ta’e hooggantoonni dhaabichaa kamuu gara mana Obbo Daawid dhaquu akka hin dadeenyetti ittifamuu isaanii qondaalli ABO OMN dubbise kun ni dubbata.
“Bilbillis, interneetiinis mana Hayyu duree irraa citee, hanga yoonaa poolisiitu mana marsee eega” jechuun gaafatamaan hariiroo Hawaasummaa ABO yeroo OMN dubbise kun kan himu yoo ta’u, Obbo Daawid haala kam keessa akka jiran wallaaluun hedduu isaan yaaddessuu dubbata.
Yaaddoo isaanii kana akka keessa beekaniif, dhaabbilee mirga namoomaa, Imbaasiiwwaniifi Boordii filannootti yeroo garaagaraa beeksisanis hanga ammaatti dhiibbaan uumame akka hin jirres namni kun himee jira.
𝑮𝒂𝒂𝒎𝒕𝒂 𝑨𝒇𝒓𝒊𝒌𝒂𝒂𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒎𝒆𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒍𝒎𝒂𝒂 𝒎𝒊𝒓𝒈𝒂 𝒏𝒂𝒎𝒐𝒐𝒎𝒂𝒂 caamsaa 𝒈𝒂𝒂𝒇𝒂 6, 2021 mooraa mana Hayyu Duree Adda Biliisummaa Oromoo Obbo Dawwid Ibsaa seenuun haala isaan irra jiran baruuf deemanis, qaamoleen nageenyaa ol seensisuu diduusaa OMN odeeffateera.
Haaluma wal fakkaatuun Caamsaa 𝒈𝒂𝒂𝒇𝒂 21, 2021 ammoo dhaabbanni 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒆 𝒐𝒇 𝑹𝒆𝒅 𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔 jedhamus, haala Obbo Daawid keessa juri hubachuuf garas deemanii, qaamolee nageenyaatiin ottifamanii jiru.
Haalonni kun marti nu yaaddessa kan jedhan qondaalli ABO OMN dubbise kun, haala kam keessa jiraachuu isaanii caalmaa, lubbuun jiraachuu isaaniifuu ragaa hin qabnu, Mootummaanis ajaja mana murtii malee mirga nama tokkoo akkas dhibuufi jiraachuu isaanii nuuf mirkaneessuu dadhabuun isaas shakkii keenya guddiseera waan ta’eef, uummatni Oromoo hoogganaasaa kana iyyaafachuu qaba jechuun OMN-tti himeera.